Super Red ပဲ့ကိုင်ရှင် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ Floral Series အကြောင်း | CosmeticMyanmar
Home » Article » Super Red ပဲ့ကိုင်ရှင် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ Floral Series အကြောင်း
နီနီခင်ဇော် လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အသံပါဝါကောင်းကောင်း ၊ ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိပြီး အောင်မြင်မှုတွေ တသီကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါနော်။ အခုနောက်ပိုင်း နီနီက သူ့ Fan တွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သူ့ရဲ့ “နီနီ” ဆိုတဲ့နာမည်လေးအတိုင်း Super Red Cosmetic ဆိုပြီး Lip Stick လေးတွေကို Matte type နဲ့ Diva, Flawless,Romance,Classy ဆိုတဲ့ နာမည်လေးတွေနဲ့ အရောင်လေးမျိုး ကို First Series အနေနဲ့ စတင်ထုတ်လုပ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ First Series လေးကလဲ နီနီရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် မကြာသေးခင်ကပဲ နီနီက Second Series အနေနဲ့ Floral Series Lip Stick နဲ့ Ask me about my lashes ဆိုပြီး Series နှစ်ခုကို ထပ်မံမိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ Product လေးကတော့ Second Series ဆိုတဲ့အတိုင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းနာမည်လေးတွေနဲ့ အရောင် ၅ ရောင်ဖြစ်တဲ့ Floral Series Lip Stick အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးကတော့ အရောင်တစ်ရောင်ချင်းစီမှာ ကိုယ်စားပြုအဓိပ္ပါယ်လေးတွေကိုယ်စီ ရှိကြတာပါပဲ။ အဲ့ဒီတော့ အရောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကို ပြောပြပေးပါ့မယ်နော်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ မိန်းကလေးအများစုရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျမယ့် အရာင်လေးကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေနော်။
Rose – Stay with me ပါတဲ့ …… (အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်မျိုးလေးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Nini lip stick လေးက တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်နော်…..မူရင်းအဓိပ္ပါယ်က အဲ့လိုဆိုတာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ကောက်ချင်သလို ကောက်လိုက်တာပေါ့နော်……. ဟဲ ဟဲ )
ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ အရာင်ဖျော့ဖျော့လေးနဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ပျိုမေတို့အကြိုက်တွေ့စေမယ့် အရောင်လေးပါ။ Cherry Blossom – Need you Now (လွမ်းလွန်းလို့ သူ့ကိုလိုအပ်နေချိန်မှာဆိုးမလား? ကိုယ့်ကောင်မလေးကို လိုအပ်နေချိန်မှာ လက်ဆောင်ပေးမလား? တဲ့)
တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အသွင်ကိုဆောင်ပေးမယ့်အရောင်လေးပါ။
Lavender – Don’t forget me ပါတဲ့ (ဒါလေးကတော့ ပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။)
စတုတ္ထတစ်ခုအနေနဲ့ သစ်လွင်ပြီး သွက်လက်မှုကိုဖော်ဆောင်ပေးမယ့်
Tulip – Together Forever ပါ။ (တစ်ဘဝလုံးလက်တွဲသွားဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပဲမလား..)
Lily – Don’t Leave Me ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ကိုယ်စီနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ lip Stick လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တယ် ဆိုတာလေးကိုလည်း ပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ Matte Type လေးတွေကိုမှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ လုံးဝကွက်တိ ကောင်းမွန်တဲ့ Product လေးပါလို့ပြောလိုက်ပါရစေ။ Matte Type လို့ဆိုထားပေမယ့် ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီးမနေပါဘူးနော်။ အဲ့ဒီတော့ Matte Type ကိုကြိုက်ပေမယ့် နှုတ်ခမ်းခြောက်မှာကြောက်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း လုံးဝအဆင်ပြေတာမို့ စမ်းသုံးကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဆိုင်တိုင်းမှာ Taster လေးတွေထားပေးထားတာမို့ အရင်ဆုံး Taster အရင်ဆိုးကြည့်ပြီးမှ ဝယ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်။ Long Lasting အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ နေ့တစ်ဝက်လောက်ကိုလုံးဝလှလှပပ ကြာရှည်ခံပါတယ်နော်။ အများကြီးထပ်ဆိုးပေးစရာမလိုဘဲ အောက်နှုတ်ခမ်းသားလေးကိုပဲဆိုးပေးပြီးညှိလိုက်ရုံနဲ့ လုံးဝ Perfect ပါပဲ။ ပြီးတော့ အစာစားရင်လည်း ကွက်သွားတာမျိုး မရှိတာမို့ အစားတစ်လိုင်းလေးတွေအတွက်လည်း လှလှပပလေး နှုတ်ခမ်းနီမပျက် စားနိုင်တာမို့ အရမ်းအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်။
ကဲ ..ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် Colour လေးတွေရွေးချယ်ပြီး Super Red နဲ့အတူတောက်ပတဲ့ နေ့ရက်တိုင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်…………..
KYLIE's The Birthday Collection
ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ ဆံပင်တွေကို ဘယ်အရာတွေနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြမလဲ ..............